December 2019 – Nagarik Network
धमलालाई फेरी हमला, अष्ट्रेलिया काण्ड
मंसिर १२ देखि पुस ४ सम्मका सबै डाटा गायव
उदयपुर– ५ दिनअघि अज्ञात समूहले ‘ह्याक’ गरेको स्थानीयतहहरुको कम्प्युटर सफ्टवेयर मंगलबारसम्म पनि पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन।
महालेखा नियन्त्रण कार्यालय (मलेनिका) ले विकसित (डेभलप) को ‘स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र)’ गत शुक्रबार देखि ‘ह्याक’ भएको थियो।
सुत्र ह्याक भएपछि देशभरका गाउँ तथा नगरपालिकाको वित्तीय कामकाज ठप्प भएको छ। स्थानीय तहमा क्रमागत र नयाँ योजनाहरु समेत प्रभावित भएको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन्।
शुक्रबार विहानदेखि चल्न छाडेको सुत्र मर्मत गर्न मलेनिकाको सूचना प्रविधि (आईटी) शाखाको प्राविधिक टोलीले अनुसन्धान गर्दा ह्याक भएको पत्ता लागेको थियो।
सांकेतिक भाषा अनुवादक नियुक्त गर्न सर्वाेच्चको आदेश
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले फरक शारीरिक क्षमता व्यक्तिसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दामा सांकेतिक भाषा अनुवादक नियुक्त गरी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकको नाममा उक्त आदेश दिएको हो।
संरक्षक हिमादेवी उप्रेती वादी भई बोल्न नसक्ने फरक शारीरिक क्षमताका आफ्ना भाइहरु गोपालप्रसाद मैनाली र बालकृष्ण मैनालीको अंश दावीसहित काभ्रे जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा उनीहरुको हकहितको विषयमा भाषा अनुवादक नियुक्त नगरी मुद्दाको फैसला गर्दा उनीहरुमाथि अन्याय हुनसक्ने दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो।‘मुद्दाको कुनै पनि कारवाही अघि बढाउदा भाषा अनुवादक राखेर मात्रै कारवाही अगाडि बढाउनु’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।
दमक- दमक नगरपालिकाले कानुन मिचेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तलब बढाएको पाइएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यरत गणेश तिम्सीनालाई दशौ तहको तलब सुविधा दिने निर्णय विवादित बनेको हो। उनी नवौ तहका कर्मचारी हुन्। यस सम्बन्धी समाचार नागरिक न्युजले प्रकाशित गरेपछि तिम्सीनाले फेसबुक स्टाटस लेखेर तलब फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए। तर नगरपालिकाले पुस ७ गते बैठक बसेर निर्णय विधीसम्म भएको भनेर तिम्सीनाको बचाउ गरेको छ।
पूर्व मन्त्री शंकर प्रसाद कोइरालाले स्थानीय तहले मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको बताए। नवौ तहको अधिकृतलाई दशौ तहको सुविधा दिने विषय कानुन भन्दा बाहिर हो, कोइरालाले भने, यो मिल्ने अवस्थामा देखिदैन।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसंग राजदूत पुरीको बिदाई भेट
काठमाडौं– भारतीय राजदूत मन्जीव सिंह पुरीले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी तथा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीसंग बिदाई भेट गरेका छन्।
मंगलबार पुरीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई शिलत निवासमा र प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारमा छुट्टाछुट्टै भेट गरेका हुन्।
भेटमा नेपाल र भारतसम्बन्धका विविध पक्षबारे चर्चा भएका थिए।
उक्त अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले राजदूत पुरीलाई धन्यवाद ज्ञापन समेत व्यक्त गरेकी थिइन्।
तीन वर्षे कार्यकाल पुरा गरी पुरी आगामी हप्ता भारत फर्कदैं छन्। उनी मार्च २०१७ बाट राजदूतका रुपमा नेपालमा आएका हुन्।
‘सरकारले सहमति तोडेका कारण राजीनामा’
काठमाडौं– संविधान संशोधनको प्रयास असफल भएपछि समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं कानून , न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यादवले आजै राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामा पत्रमा मन्त्री यादवले सरकारले संविधान संशोधनसहितका दुई बुंदे माग सरकारले एकतर्फी रुपमा तोडेको आरोप लगाएका छन्।
‘तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल तथा तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७५ जेष्ठ १४ गते संविधान संशोधनलगायत हामीले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरु सम्बोधन गर्ने शर्तसहित दुई बुंदे सहमतिका आधारमा मात्र हाम्रो पार्टी सरकारमा सामेल भएको थियो’ राजीनामा पत्रमा यादवले भनेका छन्,‘हामीले मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा संसदमा पटक–पटक यी विषयहरु प्रवेश गराउनुका साथै संविधान संशोधन लगायतका विषयहरु राखी प्रधानमन्त्री समक्ष स्मरण–पत्र पनि दिएका थियौं।’
शहरी विकासमन्त्री राईले पनि दिए राजीनामा
काठमाडौं- समाजवादी पार्टीले सरकारबाट हट्ने निर्णय गरेपछि शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले पनि राजीनामा दिएका छन्।
संविधान संशोधनको सहमति सरकारले तोडेको भन्दै समाजवादी पार्टीले सरकारबाट हट्ने निर्णय गरेको थियो। समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता राई सरकारमा सहभागि थिए। मंगलबार दुवै जनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्।
‘दुस्मन आयो भन्दै छोडेर भागे’
दैलेख – शनिबार गाउँमा भएका सामाजिक काममा उपस्थित भएर साँझमात्र घर आएँ। चिसो दिन भएकाले घर आएर बेलैमा खाना खाएर सुत्न गएँ। एक्कासि राति साढे बाह्र बजेतिर घरबाहिर आवाज आयो। ‘ढोका खोल्नुस्,’ भनेर केही म निद्रामै थिएँ। मेरी श्रीमतीले ‘को हो ?’ भनेर सोधिन्। बाहिरबाट ‘अध्यक्षज्यूसँग काम छ, ढोका खोल्नुस्,’ भन्ने जवाफ आयो। म उठें। तर मेरी श्रीमतीले ढोका खोल्न मानिनन्। तथापि मैले को रहेछ भनेर ढोका खोलें। ‘यति राति तपाईहरू को हो ?’ भनेर मैले सोधें। उनीहरूले ‘हामी विप्लवका कार्यकर्ता हौं। तपाईसँग सोधपुछ गर्नु छ, हामीसँग हिँड्नुस्,’ भने।
दमौली- नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री गगनकुमार थापाले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन युवाले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताएका छन्।
तनहुँको व्यास नगरपालिका–१ भादगाउँस्थित आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस नेपाल विद्यार्थी सङ्घ एकाइले आज आयोजना गरेको नवआगन्तुक विद्यार्थी स्वागत कार्यक्रममा नेता थापाले नेपालको एक इञ्च भूमि पनि अतिक्रमण गर्न नदिइने र भारतले अतिक्रमण गरेको जमिन फिर्ता ल्याएरै छाड्ने बताए। ‘सीमाको विषयमा छलफल गर्न भारत तयार भएको छ’, नेता थापाले भने, ‘हाम्रो पुस्ता नेपाली भूमि रक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्छ।’
नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु भनेर नेताले भाषण गरे पनि एउटा व्यक्तिले चाहेर मात्र नेपाल समृद्ध बन्न नसक्ने थापाले ठोकुवा गरे। “नायक महानायकले देश बनाउन सक्दैनन्, लोकतन्त्रको बाटोेबाट मात्र नेपाल समृद्ध बन्न सक्छ”, थापाले भने।
‘नेपाल मिस वर्ल्डको दाबेदार थियो’
काठमाडौं – मिस वर्ल्डको टप १२ मा पुगेकी मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ ब्युटी विथ प्रपोज र मल्टिमिडिया अवार्ड जितेर नेपाल फर्किएकी छन्। मिस वर्ल्डअन्तर्गतको ‘हेड टु हेड’ च्यालेन्जको समूह विजेता भएर टप ४० हुँदै टप १२ मा पुग्ने उनी पहिलो मिस नेपाल भएकी छन्। एक सय ११ देशको सहभागिता रहेको मिस वल्र्डको टप १२ मा नेपालसहित जमैका, फ्रान्स, भारत, नाइजेरिया, ब्राजिल, कुक आइल्यान्ड्स, केन्या, मेक्सिको, फिलिपिन्स, रसिया र भियतनामका प्रतियोगीहरू पुगेका थिए। सोमबार नेपाल आइपुगेकी मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठसँग मिस वल्र्डको अनुभवमा केन्द्रित रहेर स्मृति ढुंगानाले गरेको कुराकानी :
यसपटक मिसवर्ल्डको फाइनलमा नेपाल किन पुग्न सकेन ?
नेपालले मेहनत गर्दा पनि मिस वर्ल्डको हकदार हुन नसक्नुको कारण मलाई पनि जान्न मन छ। नेपाल टप ५ मा पुग्न लायक थियो। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताको सुरुदेखि मैले शतप्रतिशत रूपमा मेहनत गरिरहेकी थिएँ। मिसवर्ल्डका निम्ति मलाई सहयोग गरिरहेको टोलीको योजनाअनुसार उत्कृष्ट रूपमा सहभागिता जनाइरहेकी थिएँ। निर्णायकहरूको मापदण्डबारे मलाई जानकारी छैन। टप ५ मा म किन पुग्न सकिएन भन्ने जान्न मन छ। किनकि मलाई टप ५ सम्म पुग्छु जस्तै लागेको थियो। निर्णायकहरूको मापदण्ड थाहा भए अर्को वर्षदेखि त्यहीअनुसार तयारी गर्न सकिन्थ्यो।
एक किलो प्याजको मूल्य ३ सय रुपैयाँ !
जुम्ला – भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि जुम्लामा चाइनिज प्याज निर्यात हुन् हुन थालेको छ। अहिले सदरमुकाम खलंगा बजारदेखि ग्रामिण क्षेत्रका बजारसम्म चाइनिज प्याज छ्यापछ्याप्ती छ। यहाँको बजारमा चाइनिज प्याजको मुल्य प्रतिकिलाे २ सय ५० रुपैयाँदेखि ३ सय रुपैयाँसम्ममा किनबेच भइरहेको ब्यापारी बताउँछन्।
जुम्लामा अहिलेसम्मको रेकर्डमा अधिकतम मुल्य ८० रुपैयाँदेखि माथि पुगेको थिएन्। स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको प्याजप्रति किलाे ५० रुपैयाँमा बिक्थ्यो। तर अहिले प्याजको मुल्य आकासियो,विदेशी प्याजमा निर्भर हुनु पर्ने भयो,स्थानीय बिर्खबहादुर बुढाले भने,‘किसानलाइ ब्यवसायिक प्याज खेति गर्न अनुदानको व्यवस्था नगर्नुको परिणाम हो यो।’
तरकारी ब्यापारी सेतु बुढा चाइनिज प्याज होलसेलमै महंगो खरिद गर्नु परेकोले महंगोमै बेच्न बाध्य भएको बताउँछिन्। उनले भनिन्,‘भारतीय प्याज आउनै छाड्यो, चाइनिज प्याजले बजार कब्जा गर्यो। उपभोक्तालाइ पनि यो प्याज नखाइ बाध्य छ। ’ चाइनिज प्याज गुलियो प्रकारको छ। यो बजारमा धेरै बिक्दैन्, तर थोरथोरै भएपनि दिनमा राम्रै कारोबारो हुने गरेको छ। यो समयमा जुम्लाका तरकारी तथा खुद्रा पसलमा चाइनिज प्याज छ्यापछ्याप्ती नै छ।
हैट ! बुद्दी तामाङले क्या दिए प्रचण्डलाई !